Entertainment - All Things Myanmar Burmese
Entertainment - shweDarling.com Blog
Lu lu & Winter
2017###Dec💖People magazine cover 😊 Credit to ; designermapont Lace by KAY fabric Photo Aung Zaw (Love space) Retouch Nyi Nyi Hla baw Makeup Hello
Posted in Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples, shweDarling | No Comments »
Posted in Asia Entertainment, Myanmar/Burmese | No Comments »
Chan Chan and her baby girl!
Lulu at U Pain Bridge
Posted in Asia Entertainment, Knowledge Base | No Comments »
Words from Burmese python
Posted in Asia Entertainment, Knowledge Base, Myanmar/Burmese | No Comments »
Thet Mon Myint’s hair new color by Nature Spa
Kyar got new car as birthday Present from his sweetheart for his 24th birthday!
Lulu’ natural beauty from Nyaung Oo Phee Island ad!
Credit to original creator from facebook
Posted in Humor, Knowledge Base | No Comments »
WTF is NSC/NSA? Ilegal Arm force from Myanmar!
Isnt it threat to Myanmar State councillor, President & Myanmar Government? These illegal armed people should be delth penalties.
Posted in Articles, Asia Entertainment, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, shweDarling | No Comments »
Balance Magazine A Celebration of Lights 😎
Miss Aye Chan Moe
Our Miss Grand Myanmar 2017 Miss Aye Chan Moe National Costume Competition Credit to BMM
Very First Miss Mandalay Ma Tin Hla
ပထမဆုံး မန္တလေးမယ် မတင်လှ (၁၉၄၅-၄၆) Credit to original uploader
Cngrats to Mr. & Mrs. Fokker
Shwe Rain Si
Congrats to Thander Hlaing and hubby!
ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများက ရဲဘောက်ကျကျေးရွာ (ယခင်ခမောင်းဆိပ်တောင်ရွာ)ရှိ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအား အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့မှု ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ မျက်မြင်သက်သေများ၏စကားသံများ ========================================= ဂူရဘူနီ ————- ကျွန်မနာမည်ကတော့ ဂူရဘူနီဖြစ်ပါ တယ်။ နံနက် ၈ နာရီအချိန်မှာ ကျွန်မ တို့အိမ် ထဲကို အကြမ်းဖက်ဘင်္ဂါလီတွေက ၀င်ပြီးတော့ မျက်စိတွေကို ပိတ်လိုက်တယ်။ လက်ကိုလည်း ကြိုးနဲ့ချည်ပြီးတော့ တစ်နေရာကိုခေါ်သွားပြီး ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့မိသားစုတွေ ကို ဓားနဲ့ခုတ်ပြီးသတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မ တို့ကို တောထဲက တောင်ခြေမှာထိုင်ခိုင်း တယ်။ ကျွန်မတို့ရောက်နေတာ က ဘက် တလာရွာကိုရောက်နေတယ်။ ဘက်တလာ ရွာကိုရောက်ပြီးတော့ ယောက်ျားတွေက တစ်ဖက်၊ မိန်းမတွေကတစ်ဖက်ထားပြီး သတ် လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တွင်းထဲကိုထည့်လိုက် တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့နေတဲ့ရွာကို ကျွန်မယောက်ျားနဲ့၊ […]
Signature Blue Zone Yangon Collection Show @ Thuwunnabhumi Event Park
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ Snare၊ X-Box အပါအ၀င် နာမည်ကျော် အဆိုတော်များစွာ သီဆီု ဖျော်ဖြေခဲ့သည့် Signature Blue Zone Yangon Collection Show အား ရန်ကုန်မြို့ Thuwunnabumi Event Park ၌ အောက်တိုဘာ ၄ ရက် ယနေ့ညပိုင်းက ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Credit toဓါတ်ပုံ – နေ၀န်းထက်/ elven media group
Credit to original uploader from Facebook!
Posted in Asia Entertainment, Humor | No Comments »
CV မှာ မှားလွန်းကြတဲ့ အမှားများ
CV မှာ မှားလွန်းကြတဲ့ အမှားများ *********************** (ယခုမှ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြမယ့် လူငယ်လေးတွေအတွက် ရေးပါတယ်။ ပညာရှင်များကျော်သွားပါ။ ပညာရှင်များအတွက် ဒါလေးများ… ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်မ ဖတ်ရသမျှ CV တွေမှာ အမှားများနေကြတဲ့ ကလေးတွေအတွက် သတိပြုစရာ ဆင်ခြင်စရာလေးတွေ မျှဝေဖို့ ရေးတာပါ) ကျွန်မ အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းလွန်လွန်းလို့ ဆရာလုပ်တာလည်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မလို အင်္ဂလိပ်လို မကျွမ်းလွန်းလှသူတောင် ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့မရတဲ့ အလွဲတွေ ဖြစ်နေတာမို့ အလုပ်ကောင်းရဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ အလုပ်ရှာသူတိုင်း သတိပြုသင့်တဲ့ CV ပေါ်က ရုပ်ဆိုးလွန်းတဲ့ အမှားများပါ။ အလုပ်အင်တာဗျူးဝင်ရမှ အလုပ်ရမှာပါ။ အလုပ်အင်တာဗျူး ဝင်နိုင်ဖို့က CV ကိုကြည့်ပြီးရွေးတာပါ။ အဲသည် ကနဦးပေးပို့လိုက်တဲ့ CV ဟာ ဖြစ်သလို အမှားမှားအယွင်းယွင်းဖြစ်နေရင် […]
Posted in Job Vacancy & Career Day, Knowledge Base, Notes | No Comments »
Amay Suu’s speech
Posted in Articles, Asia Entertainment, Knowledge Base, Myanmar/Burmese | No Comments »
Son thin Par @ WA, Australia
Well planned ahead of Ex Myanmar president
Onceastupid Alwaysastupid .. 2016 Credit to soelynn khaing
Posted in Articles, Asia Entertainment, Free Burma, Knowledge Base | No Comments »
Nay Toe’s Ginvimin ad. shooting .
Sexy Ma Htet!
အကြားအမြင် ဗေဒင်ဆရာမ ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း (ခ) အီးတီ၊ အသက် (၅၈ နှစ်) သည် ယနေ့ (စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်) နံနက် ၄ နာရီ ၂၀ မိနစ်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကွယ်လွန်သူအား စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရေဝေးသုဿန်၌ သင်္ဂြိုဟ်၍ ဂူသွင်းမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ credit to Eleven_News Photo predit to Bangkokpost.com
Baby Thinzar Nwe Win
Credit to Cele Cele Small
Miss Universe Pyay 2017 Mi Mi Moe the Tun
Mi Mi Moe Thae Tun’s Swinsuit Credit to BMM
Posted in Free Burma, Games, Knowledge Base | No Comments »
Popular photos of Thinzar Wint Kyaw
Galaxy Star Winner: Nay Min Eain
Congrats Nay Min Eain!
Sad Stories told by injuired police from Terrorist Attack
မနက် ၃နာရီကျော်လောက်မှာ ကုလားတွေ အင်အား ၃၀၀၀ နဲ့ ၅၀၀၀ ကြားလောက်ရှိမယ်။ ညာသံပေးပြီး ကျနော်တို့ မြင်းလွတ်စခန်းကို တက်လာကြပါတယ်။ စပီကာတွေနဲ့လည်း ကုလားလို အော်ကြပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်နေရာ ဖြစ်တဲ့ မီးဖိုဆောင်ဘေးက ကတုတ်ကျင်းထဲ ခုန်ချ လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကုလားတွေက အဖွဲ့တွေ ခွဲလိုက်ပြီးတော့ လေးဘက်လေးတန်းက ဗုံးတွေ၊ သေနတ်တွေ၊ ဂျင်ကလိတွေနဲ့ ပစ်ပါတယ်။ ကျနော်က ကတုတ်ကျင်းထဲမှာဆိုတော့ မထိပါဘူး။ ကျနော်က လေ့ကျင့်ထားတဲ့အတိုင်း ၄၀မမ ရာဘာကျည်နဲ့ ၁၅ ချက်လောက်ပစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မထိရောက်ပါဘူး။ ထိလည်း ဒဏ်ရာလောက်ဘဲ ရတာဆိုတော့ ကုလားတွေ ပိုဆိုးလာပြီး အတင်းတက်လာပါတယ်။ ကျနော်ပစ်တာ ၂၀ ကျော်လောက် ထိတယ်၊ ဒဏ်ရာရတယ်။ ဒါပေမယ့် […]
Htut Myat ShweYi
အသက်​ ၁၆ နှစ်​အရွယ်​ Miss Universe Myanmar 2018 ပြိုင်​ပွဲဝင်​ ပြင်​ဦးလွင်​ ကိုယ်​စားပြုမယ်​ ” ထွဋ်​မြတ်​​ရွှေရည်​ ” အသက်​အငယ်​ဆုံးဆို​ပေမဲ့ Confidence ​ကောင်းတဲ့ ​သူမ ဘယ်​အဆင့်​ထိ တက်​လှမ်းနိုင်​မလဲ…? Credit to BMM
Shwe Ain Si & Han Lay
MUM ရဲ့ အမိုက်​စား 1st Runner ၂ဦး ​ရွှေအိမ်​စည်​ နဲ့ ဟန်​​လေး Credit to BMM
Myanmar 0-1 Thai
Photo – MMF
Amy Nay Linn Than’s National Costume
Credit to BMM
Wishing youaHappy Birthday! Thanks for protecting Amay Suu!
Best wishes from Ama Suu to Sea game Sport men/women
Baby Moe Yu San
Facebook post of the day!
Credit to Min Thu Kyaw
Posted in Articles, Asia Entertainment, Humor, Knowledge Base | No Comments »
FYI of Waso Thingkhan
ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်တာတော့ သင်္ကန်းဆိုင်တွေပဲဖြစ်တယ်။ ဒကာတစ်ဦးက ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်တယ်။ နှ စ်သောင်းခွဲပေးရတယ်တဲ့။ ဖွင့်ကြည့်တော့ ရှစ်ထောင် တစ်သောင်းပဲ တန်တဲ့ သင်္ကန်းဖြစ်တယ်။ တံဆိပ်က ဒိတ်ဒိတ်ကြဲနာမည်ကြီးတံဆိပ်ဖြစ်တယ်။ ဘေးခန်းကဦးဇင်းကို သူ့ဒကာတွေက ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်တယ်။ နှစ်သောင်းခုနှစ်ထောင်တဲ့။ တကယ်က ရှစ်ထောင်တစ်သောင်းပဲတန်တဲ့ သင်္ကန်းတွေဖြစ်တယ်။ မနေ့က ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာ သင်္ကန်းတွေတင်ထားတာတွေ့လို့ သွားကြည့် တယ်။ ငါးထောင်တန်သင်္ကန်းကို တစ်သော င်းခွဲအထက်ဈေးနဲ့ ရောင်းနေတယ်။ သူတို့က တရုတ်ပိတ်စကို ကိုရီးယား စင်္ကာပူ မလေး အင်ဒိုနာမည်စုံတပ်ပြီး ဈေးတင်ရောင်းတယ်။ အဲဒီသင်္ကန်းတွေ က နိုင်လွန်စတွေဆိုတော့ နေပူထဲထွက်ရင် မတော်တာမြင်ရတဲ့အထိ ပါးတယ်။ မီးခဲကပ်ထားရသလိုပူတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီနှစ်သောင်းကျော်တန်သင်္ကန်းတွေကို မဝတ်ချင်လို့ ပြန်ရောင်းရင် လေးထောင်ပဲ သင်္ကန်းဆိုင်ကပေးတယ်။ ဘာလို့လဲလို့မေးတော့ သူတို့က ပိတ်စဝယ်ပြီး သင်္ကန်းချုပ်ရင် လေးထောင်ပဲကုန်ကျလို့ အဲဒီဈေးပဲပေးတာတဲ့။ […]
Posted in Articles, Asia Entertainment, Knowledge Base | No Comments »
RiP Sayar Harjulie (Katha)
အထူးဝမ်းနည်းခြင်းမှတ်တမ်း ==================== မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး) (ဥက္ကဋ္ဌ)ဦးသန်းထိုက် (ခေါ်) ဟာဂျုလီ(ကသာ)သည် ဘန်ကောက်မြို့NCIဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်း ယနေ့ ဘန်ကောက်စံတော်ချိန်နံနက်၅နာရီအချိန်တွင်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရသည်။. Source/Yin Yin Thein Naba/©nyinyitun
Posted in Articles, Asia Entertainment | No Comments »
Phyu Phyu @ Galaxy Star Dream League Top 8 Competition Live
Sai Sai in Tux!
RIP (ko) Khine Htoo
Get Well soon (u) Khine Htoo!
Thank you to All from Government!
Sai Sai’s New Hair Style
Ma Aye Thaung’s Commercial about PAd
Miss Grand Myanmar 2017
Pyi Ti Oo’s way of protection virus?
Aye Myat Thu in Duty to support
Posted in Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples, Myanmar/Burmese | No Comments »
70th Martyrs’ Day
Thandar Hlaung is getting married soon!
၀ါကျွတ်ရင် ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သန္တာလှိုင် မော်ဒယ် သန္တာလှိုင်က ဒီနှစ် သီတင်းကျွတ်အပြီးမှာ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ ရည်​ရွယ်​ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သား သမီး ၂ဦးရဲ့ မိခင်ဖြစ်တဲ့ သန္တာလှိုင်က အခုသူ့ရဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်က စိတ်လုံခြုံမှုပေးနိုင်ပြီး အားကိုးရလောက်တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ”အစ်မအနေနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ မိသားစုဘ၀လေး ရတာတော့ ကြာပါပြီ။ ၂နှစ်လောက် ရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် အသက်လည်းရလာပြီ။ အရင်တုန်းက စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့တဲ့ မလုံခြုံမှုတွေလည်း အခုအချိန်မှာ မခံစားရတော့ဘူး။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီး ငယ်လေးတွေက ကိုယ့်ကိုယ်အလေးထားပြီးတော့ အတုခိုးနေတဲ့ စံပြအမျိုးသမီး တစ်ယောက် အနေနဲ့ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကိုလည်း ယုံကြည်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ တရားဝင်လက်ထပ်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုတာကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ ဒီ သီတင်းကျွတ်ကျရင် ကိုယ့်ဘ၀လက်တွဲဖော်အဖြစ် […]
Ei Chaw Po with Myat Thuu Kyaw @ Shooting
Phyu Phyu @ The lavender fields, provence
Dwe’s 10th Death Anniversary
ကျွန်မတို့အားလုံးချစ်ရတဲ့, အစားထိုးမရနိုင်တဲ့, အနုပညာရှင်,ကိုသားကြီး,, ဒွေး,, ဒီနေ့ဆိုရင်,(၁၀)နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီအကိုရေ,, ညီမပြုကျင့်ခဲ့ရတဲ့ဒါန,သီလ,ဘာဝနာ, အစုစု, တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနေ့စဉ်အမျှပေးဝေလျှက်ပါနော်,,ရောက်လေရာဘုံဘဝမှာ,, သူတော်ကောင်းများနဲ့တွေ့ပါစေ, မမေ့ပစ်ရက်နိုင်ဘူးအကိုရေ,, (ဒီနေ့ကိုသားကြီးအတွက်ရည်စူးလို့,အလှုဒါနဆုတောင်းမှုလေးတွေ ပြုကြရအောင်နော်)🙏🏻💐😍💕 credit to (ma) Connie
Fighter Lu Lu!
Posted in Asia Entertainment, Humor, Knowledge Base | No Comments »
Miss Htet Htet Tun
Htet Htet & baby Htet Htet
Aung La & his supporter Awn Seng
Posted in Humor, Knowledge Base, Myanmar/Burmese | No Comments »
Congratuation Aung La Nsang!
Thet Mon & baby Thet Mon’ happy dayout
IC Show @ SG
Iron Cross Rock Show in Singapore (25.6.2017) Photos Credit @ Min Htaw
Unfair Myanmar Legal System!!
(ကောင်မလေးရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သူဖြေတာတွေသာ အမှန်ဆိုရင်) ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ကျောင်းစရိတ်အတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းနေတဲ့ဆိုင်မှန်းမသိခဲ့ဘူး၊ သိသိချင်းထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်ကျသွားတယ်။ ရဲလာစစ်တယ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး (15)ပြားမိတယ်။ ရဲဖမ်းတာခံရတယ်။ ထောင် (10)နှစ်ကြတယ် လို့ သူဖြေသွားတယ်။ ဆိုင်မှာဈေးရောင်းမိတာလေးနဲ့တင် ထောင်(10)နှစ်ကျတယ်။ မိတဲ့ မူးယစ်ဆေးကလဲ (15)ပြားတည်း။ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းနေမှန်းလဲ သူက သိတာမဟုတ်..။ ဒါဆိုရင်… ပူပူနွေးနွေးပဲရှိသေးတဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့လ (2)ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အမှတ်(564) တပ်က ဗိုလ်မှူးရဲဇေယျာ စီးလာတဲ့ကားမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး အလုံးပေါင်း လေးသိန်းကျော်ဖမ်းမိခဲ့တယ်။ အဲ့တုန်းက အဲ့ဒီဗိုလ်မှူးဟာ ကားကြုံလိုက်လာတာပါဆိုပြီး သူ့တပ်က သူ့ကိုပြန်ခေါ်ထုတ်သွားတယ်။ ရဲလက်ထဲမှာ မထားခဲ့သလို ဘာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုဆိုတာမျိုးလဲ ဆက်မကြားရတော့ဘူး။ ကျောင်းစရိတ်ရှာတဲ့ ကလေးမလေးကိုတောင် ထောင် (10)နှစ်ချရဲတဲ့ ဥပဒေဟာ စီးပွားဖြစ် မြိုဆို့နိုင်အောင် […]
Amay Suu’s words for her birthday
“ကျမကို မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေ မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေ ပို့သသူများထဲမှ မိမိတို့မေတ္တာ စေတနာနဲ့ ပို့သတာတွေကို ကျမ သိမှသိပါ့လေစလို့ စဉ်းစားတာရှိပါလိမ့်မယ်။ အမှန်ပြောရရင် အမည်တိုင်း၊ အမည်တိုင်းကို ကျမ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပို့သတဲ့ မေတ္တာတွေကိုတော့ အနည်းလေးမှ မကျန် ခံစားရပါတယ်။ ဒါဟာ ကျမရဲ့ ယုံကြည်ချက်ပါပဲ။ မေတ္တာနဲ့ ပေးတဲ့ဆုတိုင်းဟာ ထိရောက်ပါတယ်။ ကောင်းကင်က ကျလာတဲ့ မိုးပေါက်တိုင်းကို မသိနိုင်ပေမယ့် ဒီမိုးပေါက်များရဲ့ စုပေါင်းအားနဲ့ … ကမ္ဘာမြေကြီး စိမ်းလန်းစိုပြေသလိုပါပဲ။ များပြားလှသော မေတ္တာ၊ စေတနာရှင်များရဲ့ အားနဲ့ ရှင်သန်နေတယ်လို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။ မချမ်းသာတဲ့ ကျမတိုို့နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေဟာ ကျမအပေါ်မှာ ရက်ရောကြပါတယ်။ စေတနာက အဓိကမို့ ပေးတဲ့ လက်ဆောင် အသေးအကြီး တန်ဖိုးရှိ မရှိကို […]
Ba Toe & Ba Sai @ Samsung Iconic Center Launch
အမွှာညီအကိုနှစ်ယောက်လုံး ၁၀တန်းစာမေးပွဲမှာ ခြောက်ဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်တာဒီတခါပထမဆုံးတွေ့ဖူးတာပဲ။ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့မိဘဆရာသမားတွေလည်းပင်ပန်းရကျိုးနပ်တာပေါ့။ Credit to ​အောင်​​ကောင်းစံ
Happy Birthday Amay Suu!
Sunday Debate with Ta ku ku ku Bu let
ပါဝင်​သူများ ကို​နေမျိုးဇင်​ ကိုသီဟ​သွေး ဦးလှ​ဆွေ ( တကူးကူးကူ ဘူးလတ်​)
Some stole Tin Zar Maw’s Underwear
ဟွာလေ… ပြောစရာရှိတာပြောလိုက်တော့မယ်… အမေ့လည်းအသိပေးလိုက်ပြီမို့လို့..!!! ၂၇ရက်နေ့ညက Novotel Hotel မှာ ပွဲတစ်ခုဆိုတယ်.. နောက်ဆုံးပိတ်ဆိုရတာဖြစ်လို့ ဆိုပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာ ArtistRoom ထဲမှာလူတစ်ယောက်မှမကျန်ခဲ့သလို ကိုယ်ထားခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံလွယ်အိတ်တစ်လုံးလုံးလည်းမရှိတော့ဘူး… cctv checking လုပ်တော့ အဲ့ဒီ အခန်းထဲ camera မတပ်ထားဘူးဆိုပဲ!!! အေးပေါ့ .. ချွတ်ဟယ်ဝတ်ဟယ်တွေမလုံမခြုံဖြစ်မစိုးလို့ထင်ပါတယ် အမှန်ကတော့ အားလုံးက အိမ်သာခန်းထဲဝင်လဲကြတာပါ.. တပ်ထားသင့်ပါတယ်!! ဓာတ်သိပေါ့ ခိုးသူက…!!! ခုဘဝ မရှိလို့ခိုးတာက ရတဲ့ပစ္စည်းဘယ်လောက်ကြာအောင်စားရမလဲကွယ်!!! သံသရာတစ်ခုစာ နာမှာ မတွေးမိဘူးလား!!! အပြစ်ခံရတော့ မညည်းကြေးပေါ့!!! ၂၈မနက် London က မိသားစုဆီပြန်ရမယ့်ခရီးရှည်ဆိုတော့ လက်ကျန်မြန်မာငွေအနည်းအပါး နဲ့ ဖုန်း၂လုံး ( အဟောင်းတစ်လုံးထဲမှာက မေ့သမီးလော်ရဲ့ ပုံတွေ အမှတ်တရ )နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအနည်းအပါးပဲပါပါတယ်!!! အားလုံးပြန်ရချင်ရင် ၁၅သိန်းနဲ့၂၀ ကြားကုန်ရမှာပေမယ့် […]
ဆိုးလွန်းလှသော ဘ၀များ ================== မနေ့ည (ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၇) ၇ နာရီခန့်က Interlace condominium၊ ၁၉ ထပ်မှ အိမ်အကူ မြန်မာမိန်းကလေး တစ်ယောက် ခုန်ချကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားခဲ့သည်။ သူခုန်မချမီ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ခုန်မချဘို့ တားသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုလည်း တွေ့လိုက်ရသည်။ အလွန်စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်၏။ မိမိကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဘို့ဆိုတာ သိပ်လွယ်လှသည့်အလုပ် မဟုတ်ပါ။ ဒုက္ခသုက္ခများကို ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင် တော့သည့်အဆုံး၊ ရွေးစရာ တခြားလမ်းကလည်းမရှိ ဆိုတော့ သည်လမ်းကို ရွေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သူဘာတွေ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသည်ဆိုတာကတော့ သူမှ ဂဃနဏပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူ့အိမ်ရှင်များပြောတာကို မည်မျှလောက် ယုံစားလို့ရပါမည်နည်း။ သည်ကဲ့သို့သော အမှုမျိုးများ စင်ကာပူတွင် ကြိုကြားကြိုကြား တွေ့ရတတ်သည်။ […]
New face of the week “Nang Tha khin”
စွယ်စုံရသရုပ်ဆောင် __________________ လှည်းကူးတွင် ကျူးကျော်အဖြစ်လည်းကောင်း လယ်ယာမြေရရှိရေးလှုပ်ရှားသူအဖြစ်တဖုံ တောင်သူလယ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှ လှုံ့ဆော်သူ စသည့် ကျရာဇာတ်ရုပ်အဖုံဖုံကို ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသူတစ်ဦးအား တွေ့ရှိရသောအခါ …. Credit to Thorn nay soe
Nang yati Khine
Photo by TCME
Khant Sithu’s Birthday
Photo credit Aye Zaw Moe b; b;
Lu Lu’s New chaung tha hotel ad.
RZarni & Ones’s Donation
နမ့်စန် သဘာဝတရားရိပ်သာ ကျောင်းမှာ မိဘမဲကလေးတွေ ကို ညနေစာ အလှူလေးပါ.. သာဓု သာဓု သာဓု
မဆုန်​သင်း ရဲ့ ချင်းစတိုင်​ က​လေးချီနည်း
Model Su Myat Phoo
သားငယ် လက်စွမ်းပြလိုက်တဲ့ မိုက်ကယ့်အကြောင်း ///////////////////////////////://// ဒီမိုက်ကယ်ဆိုတာ ယ္ခ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ဆွေဆွေစံ ကုမ္မဏီထောင်စားပါတယ်။ လူလိမ် လူညာ လူပွဲစားတစ်ယောက်ပါ။ ဘာKNU ကမှမဟုတ်ဘူး KNUနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်စားတာပါ။မိန်းမလဲရှုတ်တက်ပါသေးတယ်။KNUထည်းက ကိုသားကြီးတစ်ယောက်တော့မှတ်မိပါတယ် ကျန်လူတွေတော့မသိတော့ပါဘူး။ဒီကောင်မိုက်ကယ်ကျော်မြင့် ၂၀၁၃ /၁၀လပိုင်းမှာ ကျော်တို့ထိုင်းကိုတက်မဲ့ လူအရောက် ၁၅၁ တစ်ယောက်ပို့ပါတယ်။၁၅၁ယောက်အဖွဲ့ထဲ ကျနော်တို့ လင်မယားနှစ်ပါပါတယ်။အတူတက်လာပြီး ၈လလောက်ထိုစောင့်နေရတဲ့သူတော်တော်များများဟာ အန်းငွေပြန်မရပဲပြန်သွားရတဲ့သူတွေလဲ အများကြီးပါ။ ဒီကောင်အကြွေးပါတ်လည်ဝိုင်းပြီးတော့ မြောက်မီးခဲကိုင်မိထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ့။၂၀၁၃ နှစ်ထဲမှာပဲ ထိုင်းမှာအလုပ်သွားလုပ်မဲ့လူ ၃၀၀ လောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဦးစောင်ပြီးတော့ အလုပ်သမားတွေရဲ့လက်ဗွေစာရင်းမရ ရကောင်းမလားဆိုပြီးဆန္ဒထွက်ပြတယ် ခွင့်ပြုမိန့်မရှိပဲ သွားပြတော့ ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ထောင် ၆ လကြပါတယ်။ လူအယောက် ၃၀၀ ဟာသူထောင်ကြနေတော့သွင်းထားတဲ့ငွေကြေးပြန်တောင်းတဲ့သူရှိသလို မတောင်းပဲ သူထောင်ကထွက်တဲ့အထိ စောင့်တဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ် တော်တော်များများဟာ သူ့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ကျော်တို့အဖွဲ့တုမ်းကဆိုရင် သူပို့တာကတစ်နေရာ […]
Photo Credit : Wunna Khwar Nee
Shan Model Nang Nang Pan
Happy Birthday to Lu Lu!
2007 VS 2017 What’s the difference?
2017 VS 2007 ယနေ့ခေတ် ဆန္ဒပြပုံ စတိုင် ၂၀၀၇ ဆန္ဒပြပုံကတော့ … အရပ်ရှစ်မျက်နှာကို မေတ္တာပို့ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပြီး အေးချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတာ ဘာကွာလည်း ? ( မိတ်ဆွေတို့အမြင်လေး ရေးပေးပါ ) ဆဲခြင်း ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုခြင်းများ မရေးပါရန် တောင်းပန်ပါသည် Credit to Nay Myo Han
Sai Sai is on his way to ?
ညကတည်းကထွက်လာတာ အခုထိမရောက်နိုင်သေးပါ ပျင်းလို့ အရည်ပျော်ကျတော့မယ်
Myanmar most wanted criminal who still using Facebook..unbelieable
Posted in Articles, Humor, Knowledge Base, Myanmar/Burmese | No Comments »
Htun aeindra bo’s future business from Maymyo
True stories behind Yangon PM vs 20 minutes black out of Yangon Sule Shandri-la5stars Hotel
မနက်​က ကိုဖြိုးမင်းသိန်း ဆူး​လေ ရှန်​ဂရီလာမှာ အာဏာ ပြ​နေတယ်​ ဆိုတဲ့ သတင်းကို လူ​ပြော များ​နေလို့ သွားကြည့်​ မိတယ်​။ SMEs​တွေ ကိစ္စ ​ဆွေး​နွေးပွဲ လုပ်​တဲ့ အချိန်​မှာ မီးပျက်​ သွားလို့ ဟိုတယ်​က တာဝန်​ရှိသူ တစ်​​ယောက်​ကို ​ခေါ်ပြီး ​ပြော​နေပုံ ရတယ်​။ ​ပြော​နေသံက ​ဒေါသ တကြီး ဟိန်း​ဟောက်​ ​နေတဲ့ပုံ​တော့ မ​ပေါက်​ပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ့်​ လူ​တွေက ဝန်​ကြီးချုပ်​ လမ်း​ကြောင်း မီးမပျက်​ ရဘူး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အစာမ​ကြေပုံ ရပါတယ်​။ ​နောက်​ထပ်​ နည်းနည်း ထပ်​စုံစမ်း ကြည့်​​တော့ သတင်း ထဲမှာ မပါတဲ့ အချက်​ တစ်​ချို့ သိလာတယ်​။ ​ဆွေး​နွေးပွဲမှာ ထိုင်းနိုင်​ငံက ဘဏ်​လုပ်​ငန်းရှင်​​တွေ ပါတယ်​။ […]